ဆင်းရဲပေမယ့် သူများ ပိုက်ဆံအလကား မလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ချီးကျူး လေးစားစရာစိတ်ဓာတ် - RealThadin
ဒီလိုကလေးလေးတွေထဲမှာ အင်မတန် မျက်နှာချိုပြီး သနပ်ခါးတွေအပြည့်လူးထားတဲ့ သူများပိုက်ဆံ အလကားမလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးက လေးစားစရာပါ….
ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲ သူတစ်ဦးက ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ အောက်က စာလေးကို ခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ် နေ့ လယ်က ကုသိုလ်တော် ဘုရားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ချာတိတ် စတွေ့တွေ့ချင်း သူကကျနော်တို့ကိုပန်းလာရောင်းတယ်ဗျ ကျနော်တို့လဲပန်းမဝယ်ဘူးဆိုတော့ သနပ်ခါးလိမ်းပေးရမလားတဲ့မုန့်ဖိုးပေးချင်သလောက်ပေး ခဲ့ပါတဲ့(အသက်ငယ်ပေမယ့်သူတစ်ပါးပိုက်ဆံ ကိုအလကားမလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုတော့လေးစားမိတယ်)
ကျနော်လဲ သူသနပ်ခါးလိမ်းတာသဘောကျတာနဲ့ တစ်ချက်ခုတ်၂ချက်ပြတ်ဆိုပြီးသူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက် မုန့်ဖိုးပေးပေါ့(သနပ်ခါးလိမ်းထား တာကတော့အလန်းကြီး)အဲ့လိုကျ ကိုယ်တော်ချောကသွားကျိူးးလေး နဲ့ရယ်ပြတယ် အသက်ကခုမှ၅ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့….စကားကတော့တတ်သလားမမေးနဲ့ဒီလိုကလေးလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ပန်းရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် သနပ်ခါးလိမ်းပေးရင်ဖြစ်ဖြစ်မုန့်ဖိုးများများပေးကြပါ
၂၀၀~၅၀၀လောက်နဲ့ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုပေမယ့်လည်း 200~500 တွေများလာရင်တော့ သူတို့အတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး အသက် ၅ နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် သူများပိုက်ဆံ အလကားမလိုချင်တဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကူညီခဲ့ပုံလေးကို ကို ဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်သနပ်ခါးတွေ အပြည့်လိမ်းထားတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကလေးလေးရဲ့ ပိုက်ဆံအလကားမလိုချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အစ်ကိုကြီးရဲ့ ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို လေးစားသောအားဖြင့် ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ပါနော် ဒီလို စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင်တွေ များများလိုတာကြောင့် အားလုံးသိအောင်လည်း Share ပေးနိုင် ပါတယ်နော် …
ဒီလိုကလေးလေးတှထေဲမှာ အငျမတနျ မကျြနှာခြိုပွီး သနပျခါးတှအေပွညျ့လူးထားတဲ့ သူမြားပိုကျဆံ အလကားမလိုခငျြတဲ့ ပနျးရောငျးတဲ့ ကလေးလေးတဈယောကျရဲ့ စိတျဓာတျလေးက လေးစားစရာပါ….
ဒီအကွောငျးလေးကိုတော့ လူမှုကှနျရကျသုံးစှဲ သူတဈဦးက ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့ အတူ အောကျက စာလေးကို ခုလို မြှဝခေဲ့ပါတယျ နေ့ လယျက ကုသိုလျတျော ဘုရားမှာတှခေဲ့တဲ့ခြာတိတျ စတှတှေ့ခေ့ငျြး သူကကနြျောတို့ကိုပနျးလာရောငျးတယျဗြ ကနြျောတို့လဲပနျးမဝယျဘူးဆိုတော့ သနပျခါးလိမျးပေးရမလားတဲ့မုနျ့ဖိုးပေးခငျြသလောကျပေး ခဲ့ပါတဲ့(အသကျငယျပမေယျ့သူတဈပါးပိုကျဆံ ကိုအလကားမလိုခငျြတဲ့စိတျကိုတော့လေးစားမိတယျ)
ကနြျောလဲ သူသနပျခါးလိမျးတာသဘောကတြာနဲ့ တဈခကျြခုတျ၂ခကျြပွတျဆိုပွီးသူ့ကိုဓာတျပုံရိုကျ မုနျ့ဖိုးပေးပေါ့(သနပျခါးလိမျးထား တာကတော့အလနျးကွီး)အဲ့လိုကြ ကိုယျတျောခြောကသှားကြိူးးလေး နဲ့ရယျပွတယျ အသကျကခုမှ၅ နှဈပဲရှိသေးတယျတဲ့….စကားကတော့တတျသလားမမေးနဲ့ဒီလိုကလေးလေးတှနေဲ့တှရေ့ငျပနျးရောငျးတာပဲဖွဈဖွဈ သနပျခါးလိမျးပေးရငျဖွဈဖွဈမုနျ့ဖိုးမြားမြားပေးကွပါ
၂၀၀~၅၀၀လောကျနဲ့ဘာမှမထူးခွားဘူးဆိုပမေယျ့လညျး 200~500 တှမြေားလာရငျတော့ သူတို့အတှကျ အမြားကွီးအထောကျအကူဖွဈပါလိမျ့မယျဆိုပွီး အသကျ ၅ နှဈသာ ရှိသေးပမေယျ့ သူမြားပိုကျဆံ အလကားမလိုခငျြတဲ့ ကလေးလေးတဈယောကျရဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ ကူညီခဲ့ပုံလေးကို ကို ဖျောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျသနပျခါးတှေ အပွညျ့လိမျးထားတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ခဈြစရာပုံလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ…
ပရိသတျကွီးတို့လညျး ကလေးလေးရဲ့ ပိုကျဆံအလကားမလိုခငျြတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ အဈကိုကွီးရဲ့ ကူညီတတျတဲ့ စိတျဓာတျလေးကို လေးစားသောအားဖွငျ့ ဂုဏျပွုစကားလေးတှေ ပွောခဲ့ပါနျော ဒီလို စိတျဓာတျ ပိုငျရှငျတှေ မြားမြားလိုတာကွောငျ့ အားလုံးသိအောငျလညျး Share ပေးနိုငျ ပါတယျနျော …